महोत्तरीका ३०३ वर्ष पुरानो विद्यालय : जहाँ बालागुरु षडानन्दले पढेका थिए ! – The Public Today
द पब्लिक टुडे साउन ९, २०७८ २:०९ pm
महोत्तरी, साउन ९ गते । तप्–तप् वर्षाको पानी छतबाट एकोहोरो चुहिरहेको छ। कोठाहरूका पर्खालसमेत चिरा–चिरामा विभक्त छन्। भग्नावशेष भवनको संरचना कतिखेर ढल्छ त्यसको ठेगान छैन। भुइँमा इँटा र काठ छरपस्ट छन्।
बटुकहरू सुत्ने खाट भग्नाशेषको कब्जामा परेझै देखिन्छ। सुत्ने ओछ्यान, ओढ्ने ब्ल्याङ्केट र पढ्ने कापी–किताब सबका सब इँटा र काठले पुरिएको छ। यसै भग्नाशेषमा हराइरहेको छ, नेपालकै सबैभन्दा पुरानो श्री राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मटिहानीको इतिहास। ३०३ वर्ष पहिले महोत्तरी जिल्लाको मटिहानीमा वि.सं. १७७५ सालमा रामलला दास(तस्मैया बाबा)का शिष्य जयकृष्ण दासले संस्कृत पाठशालाको नामले स्थापना गरेका थिए।
१८२५ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभन्दा ५० वर्ष पहिले मटिहानीमा गुरुकुल खोलिएको थियो। १९१० सालमा जंगबहादुर रानाले दरबार हाईस्कुल खोलेका थिए। उनले खोलेका विद्यालयलाई नै अहिलेसम्म नेपालको सबैभन्दा पुरानो स्कुल भनेर भनिन्छ।
यो गुरुकुल साँचो अर्थमा ‘मिनी नेपाल’ हो जहाँ सबै थरीका फूलरूपी बटुकहरू मटिहानीको बगैंचामा फक्रिरहेका छन् :
– विन्देश्वरीप्रसाद मण्डल, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी
दरबार हाईस्कुलको नामनिशान नहुँदै मटिहानी–७ मा लक्ष्मीनारायण मठबाट संस्कृत गुरुकुल सञ्चालन गरिएको थियो। गुरुकुलको भौतिक संरचना जति जीर्ण छ त्योभन्दा अब्बल यसको इतिहास छ तर राज्यको नजरमा कोसो टाढा छ। पुरातात्त्विक विभागको अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजमा यो देशकै जेठो गुरुकुल अटाउन सकेको छैन। धमिराले दस्तावेज सखाप पारिसकेको छ।
पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई यसको इतिहास लोरी, कथा, कहानीमा सुनाउँछन्। जीवित पाँच पुस्ताको जिब्रोमै यो विद्यालयको नाम छ, कति पुस्ता माटोमा मिलिसके। पुरानो संरचनालाई बचाउन ज्ञानलाई विज्ञानसँग जोड्न प्रविधिको प्रयोगको खाँचो छ।
यस गुरुकुलमा कक्षा ८ देखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ। अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक गरी पाँच सय पूर्णांक अनिवार्य छ। जनसंख्याको बदला अनिवार्य संस्कृत भाषा पढाइन्छ। ब्राह्मण बटुकहरू देव तथा पितृकार्यका लागि कर्मकाण्ड पढ्छन् भने अन्यले ऐच्छिक गणित र शिक्षा पढ्छन्। ८ सय पूर्णांकमा वेद, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य, न्याय, दर्शन पाँचमध्ये एउटा विषय रोज्न पाइन्छ। कक्षा १२ पास गरेपछि नजिकै रहेको याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण विद्यापिठमा संस्कृतकै शास्त्री र आचार्य अध्ययन गर्न जान्छन्।
संस्कृतबिना आधुनिक भाषाहरू शुद्घ हुँदैनन्, संस्कृतलाई रोजगारमूलक शिक्षासँग जोडेर अघि बढाउन सकिन्छ:
– अमिरिलाल मण्डल, पूर्वप्रधानाध्यापक
संस्कृत सभ्यता र ज्ञानको ब्रह्माण्ड हो जसबाट विज्ञानका सबै सूत्र विकास भएका हुन् :
– डा. राजेश झा, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश २
वेद लोप हुन थाल्यो त्यसैले वेद बचाउन वेद विषयमै आचार्य हुँदै वेद विषयको प्राध्यापक बन्छु :
– विकास झा, बटुक
ज्योतिषमा आचार्य गरेर ज्योतिष परामर्श केन्द्र खोल्छु : – ज्ञानेश्वर दुबे, बटुक
प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम। त्यहाँबाट १५ किलोमिटरपश्चिम–दक्षिण लागेपछि महोत्तरीको जलेश्वर आउँछ। त्यहाँबाट घरी पूर्व त घरी दक्षिण मोडिँदै मटिहानी बजार पुगिन्छ। बजार नपुगिँदै गाउँकै मुखमा भव्य स्वागतद्वारले पाहुनालाई स्वागत गर्दछ।त्यो स्वागतद्वारमै संस्कृतको श्लोकबाट संस्कृत शिक्षाको गरिमालाई झल्काउने काम गरेको छ।मटिहानी बजारको मुख्य सडक।सडकको उत्तरतिर लक्ष्मीनारायण मठ छ अनि दक्षिणमा लक्ष्मी सागर पोखरी। बिहानको सूर्यको किरणको आकर्षणसँगै वैदिक मन्त्रोचरण र शंघघोषले मटिहानी तपोभूमि र ज्ञानभूमिको अनुभूति गराउँछ। पोखरीको पूर्वपट्टिको किनार छिचोल्दा एउटा गेट आउँछ। जहाँ श्री राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय लेखिएको छ। जसले तीन सय तीन वर्षदेखि अविच्छिन्न रूपमा शिक्षाको ज्योति फैलाइरहेको छ। अरूलाई उज्यालो दिने गुरुकुल आफैं अँध्यारोमा परेको छ। गुरुकुल परिसरमा पस्दा संस्कृतमा एउटा नीति श्लोकमा नजर पर्छ :
प्राचीनकालमा राजनीतिसँग मान्छेलाई मतलव हुँदैनथ्यो। जो राजा भए पनि हामीलाई के मतलव ? भन्ने थियो। कुन पार्टीको सरकार बन्छ ? को प्रधानमन्त्री बन्छ ? अहिले त चाहिनेभन्दा बढी चासो हुन्छ। संस्कृत पढ्नेहरूकै दोषले यो भाषा ओझेलमा पारे। १७/१८औं शताब्दीसम्म संस्कृतमा धेरै उन्नति भयो। सबैले संस्कृत पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। पढ्नेले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। विगतमा गतिला विद्यार्थी र गतिलै गुरुहरू हुन्थे। अहिले फरक छ। शिक्षक पढाउँदैनन्, राजनीतिसमेत गरेर हिँड्छन्। ३०३ वर्ष पुरानो राजकीय संस्कृत विद्यालयको इतिहास खोजी गरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ। -अन्नपुर्ण पोस्टबाट